Mgbasa Ozi M na onye ọrụ ibe, Bill Dawson, guzobere ọhụrụ anyị kwa izu nke ahụ ka malitere ịbanye taa. (Ọ bụrụ na ị denyeghị aha, ị na-atụfu ihe karịrị $ 12,000 na onyinye… na-eto eto!).
Gịnị kpatara nke a ji dị ukwuu? Kwa izu, M na-ede blọgụ blọgụ na ngalaba Akwụkwọ Akụkọ wee mezuo mkpọsa ahụ iziga. Sistemụ na-akpaghị aka na-enyocha ọdịnaya sitere na peeji nke omenala (yana ndepụta Twitter m) na email na-emepụta ma zipụ. Ọ bụghị naanị na nke a bụ na naanị m ga-echegbu onwe m banyere ịde ọdịnaya n'ime WordPress… M ga-enwe kwa akwụkwọ ozi email m niile ezitere!